'ए' डिभिजन लिगमा अाज तीन खेल, विभागिए डर्वीमा कसले बाजी मार्ला ? | | Neplays.com
‘ए’ डिभिजन लिगमा अाज तीन खेल, विभागिए डर्वीमा कसले बाजी मार्ला ?
सहिद स्मारक ए डिभिजन लिगमा आज तीन खेल हुनेछन । जसमा त्रिभुवन आर्मीले नेपाल पुलिससँग खेल्ने छ भने मच्छिन्द्रले संकटासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । यस्तै ब्रिगेड ब्याइजले एपिएफ क्लवसँग भिड्नेछ ।
एन्फा कम्प्लेक्समा बिहान ११ बजे हुने पहिलो खेलमा ब्रिगेड ब्वाईज क्लब र विभागीय टिम एपीएफले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । जारी लिगकाे पुछारमा रहेकाे ब्रिगेड ब्याइजले २ खेलमा जित निकाल्न सकेकाे छैन भने एपिएफले एक जित र एक बराबरी खेलेकाे छ ।
यस्तै अाजै हुने अर्काे खेलमा दिउँसो साढे २ बजे हुने दोस्रो खेलमा विभागीय डर्बीको भिडन्त हुनेछ । जहाँ त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल पुलिस क्लब तीन अंकका लागि भिड्नेछन । दुबै टिमले लिगमा एक जित र एक बराबरी खेलेका छन र समान चार चार अंक बेकेका छन ।
त्यही दिन दिउँसो साढे २ बजे काठमाडौंको हलचोक मैदानमा मछिन्द्र क्लब र संकटा क्लब तीन अंक बटुल्ने लक्ष्यका साथ मैदान उत्रनेछन् । संकटा लगातार तेस्रो जित निकाल्ने दाउमा हुनेछ भने मछिन्द्र पहिलो जितको खोजिमा हुनेछ ।